Nwụnye nke ATR 42 / 72 maka P3D agha ihichapụ FSX-Ewube?
Nwụnye nke ATR 42 / 72 maka P3D agha ihichapụ FSX-Ewube? 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1351
Agbalịrị m ịwụnye ATR 42 / 72 maka P3D4, mana na mbido, agwara m ka m tinye ihe nke m FSX- na FSX: SE ATR's (lee nseta ihuenyo agbakwunyere).
Ọ bụ ezie na ha niile nwere ndekọ ederede dị iche iche.
Agbanyeghị, Achọrọ m idobe FSX-Nmeghari - ya mere m kagbuo ya P3DEchichi nke 4.
Onwere onye nwere mmezi nsogbu a? Ma ọ bụ FSX-Achọgharịgharị mgbe etinyechara (nwa oge) eh, tinyere ya P3DEchichi nke 4?
Nwụnye nke ATR 42 / 72 maka P3D agha ihichapụ FSX-Ewube? 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1356
Ihe m n’eme bu imeputa faịlụ atr n’ime faili ugbo elu tinyere ogwe ihe na uda na nsonaazụ ya na isi ndekọ ya gaa n’ebe dị iche n’elu gị pc ma ọ bụ draịvụ mpụga ka hapụ mmemme ahụ hichapụ faịlụ ahụ ka ọ wụnye ya nwere ike itinye ya. faịlụ azụ fsx na uzuoku gị ma ọ bụrụ na i notomi na idetị faịlị ndị ị kwadobere ime fsx na uzuoku na ihe niile ga-alaghachi ebe dị mfe dịka. ọ bụ ka ọ dị mfe ịdabere faịlụ ndị ahụ niile dị elu karịa ịnwa iburu nke nke a ga - atr ps mgbe ọ gwara gị ka ị degharịa faịlụ ndị a ka ị sị ee niile ndị ọzọ merụọ egwuregwu ahụ.
Oge ike page: 0.297 sekọnd